Nzira yekuwana yemahara Nintendo Chinja nekontrakita ye iPhone
Kana iwe uchitsvaga iyo itsva iPhone 12 asi zvakare uchida kuisa maoko ako paNintendo Shandura, pane nhau dzakanaka: unogona kuwana ese ari musumbu. Muchokwadi, kana iwe uchiziva kwekutarisa, unogona kutora yemahara Nintendo Shandura bundle pane mamwe ma iPhone modhi zvakare, senge iPhone SE (2020), iPhone 11, uye iPhone XR. Iyo Nintendo Shandura inodhura £279.99 nepo Switch Lite ichidhura… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuwana mahara Nintendo Chinja nekontrakita ye iPhone
Maitiro ekukopa uye unama paMac
Kana iwe uchida kufambisa bhuroka remavara, mufananidzo kana chimwe chinhu kubva kune chimwe chikamu chegwaro kuenda kune chimwe, kana kubva kune imwe app kuenda kune imwe, unofanirwa kushandisa kopi (kana kucheka) uye unama. PaMac kana MacBook, mapfupi ekhibhodi eizvi akasiyana nemamwe majaira, saka kana uchibva Windows unogona kuvhiringika. Tichatsanangura matanho ari nyore aunofanira kutora kuti… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuteedzera uye kunama paMac
Maitiro ekutora Photoshop pane Mac
Apple emahara Mac maapp: Mapikicha uye Ongorora anogona kuwana mabhesiki ekubata kumusoro kwechifananidzo kana pikicha, asi kana iwe uchida kuita chero chinhu chakapfuurira mberi unozoda yakazvitsaurira yekugadzirisa mifananidzo app. Adobe's Photoshop ndiyo indasitiri yakajairwa, nekuda kweakawanda ayo maficha uye kugona. Heano maitiro ekuwana kopi ye Photoshop pane yako Mac, kana, uchikundikana izvo, chinotevera chakanakisa chinhu. Sei… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekutora Photoshop pane Mac
Maitiro ekudzora ruzha kukanzurwa paAirPods Pro
Imwe yemabhenefiti makuru iyo AirPods Pro inokupa iwe kune imwe mari ndeyekushanda kudzima ruzha, chinhu chinoshanda chinotarisisa ruzha uye chinotamba iwe chakatarisana newavelength kugadzira kunyarara kwekunyepedzera. Iwo akajairwa AirPods anongopa chete ruzha rwekuzviparadzanisa nevamwe, izvo zvinoreva kuti vanoita senge plug uye hainyanyi kushanda. Mushure mekubhadhara… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzora ruzha kukanzurwa paAirPods Pro
Maitiro ekuita kuti yako iPhone iridze mimhanzi kubva kuSpotify
Spotify ndeye yakakurumbira mimhanzi yekufambisa sevhisi ine zvese zvemahara uye premium tier. Kana iwe uchida kuishandisa pa iPhone yako pachinzvimbo cheApple Music (inova yekunyorera chete) hezvino zvekuita. Kana iwe uchida kushandisa Spotify sevhisi kwete Apple Music pane yako iPhone une akati wandei sarudzo. Yekutanga uye yakanyanya kujeka sarudzo kurodha pasi Spotify app, inova ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuita yako iPhone iridze mimhanzi kubva kuSpotify
Nzira yekuwedzera yechipiri kumeso kune Chiso ID
Face ID inzira inokurumidza uye yakachengeteka yekuvhura yako iPhone kana iPad Pro, asi iwe ungasaziva kuti iwe unogona chaizvo kuseta zvinopfuura chiso chimwe chete kushandisa chimiro. Ichi chiso chechipiri chinogona kunge chiri chemudiwa, zvichiita kuti mumwe wako kana mwana akwanise kuwana foni yako asingade mugi wako unonyemwerera kuti uivhure. Asi inogonawo kunge iri vhezheni yakati siyanei zvako: iwe une… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuwedzera kumeso kwechipiri kumeso ID
Iko Apple Watch inoshanda pasina iPhone?
Iyo Apple Watch yakakurumidza kukura kuita chimwe chezviitiko zvakakwana zvauchawana muhuwandu hwekambani. Kubva payakaunzwa muna 2015, iyo nguva yemagetsi yaenderera mberi kuve mutambi ane mukurumbira muchikamu chiri kubuda chinopfekeka tekinoroji. Kupfuura zvizvarwa zvakasiyana Apple yakawedzera zvinhu zvakaita seGPS, LTE uye kudzivirira kwemamiriro ekunze izvo zvinoita kuti iyo Watch iwedzere kuve ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Inoita Apple Watch inoshanda isina iPhone?
Maitiro ekuisa maapps pane Mac yako
Kunyange chiri chokwadi kuti maMac anouya nemitoro yesoftware yakakura inogona kukubatsira kuti uwane zvinhu zvakawanda zviitwe kunze kwebhokisi, hazvizotora nguva usati wafanira kuwedzera ako chaiwo mapurogiramu kuDock pazasi pekona rako. Heano maitiro ekurodha pasi nekuisa maapplication kubva kuMac App Store kana kubva pawebhusaiti yemusimudziri, uyezve tichakurukura zvekuita kana iwe usingakwanise kuisa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuisa maapps pane Mac yako
Kana iwe uri kutevera dzidziso, kana kungoita yakapusa chiito, iwe ungangodikanwa kushandisa iyo Command kiyi pane yako Mac Kana iwe uchinetseka kuti ndeipi kiyi iyo uye kupi kuti ungaiwana - kunyanya kana usiri kushandisa Mac keyboard - saka wauya kurudyi nzvimbo. Chii chinonzi kiyi yekuraira? Iyo Command kana Cmd kiyi (dzimwe nguva inonzi kiyi yeApple) ndeimwe ye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kiyi yekuraira iripi?
Maitiro ekugadzirisa iyo kana imwe chete AirPod iri kushanda
AirPods inzira huru yekunakidzwa nemimhanzi uye mabhuku ekuteerera, kana kunyange kutora mafoni uchichengeta maoko ako akasununguka. Asi chii chaungaite kana iwe ukaona kuti uri kungonzwa ruzha kubva kune imwe yemapodhi? Muzviitiko zvakawanda, izvi zvinogona kugadziriswa mumaminitsi mashoma nekugadzirisa zvishoma muzvirongwa. Muchikamu chino tinoratidza maitiro ekuita kuti ma AirPods ako adzoke uye ashande kamwe chete ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuzvigadzirisa kana imwe chete AirPod iri kushanda
Maitiro ekudzima System paMac
Kana Mac yako yakadzikira pakuchengetera inogona kukonzera matambudziko - unogona kuona meseji yekuti yako yekutanga-dhisiki yave kuzara, semuenzaniso, uye kana ukaregeredza izvozvo unogona kuwana haugone kana kutanga Mac yako! Kuchengetera kwakaderera kunogonawo kudzikamisa Mac yako pasi uye kukonzeresa dzimwe nyaya kuimisa kuti isashande pakugona kwayo. Kana iwe uchinetseka nekusakwana kuchengetedza paMac yako unogona ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzima System paMac
Iyo Dell XPS 15 ndiyo sarudzo yedu yeakanakisa 15-inch laptop
Iwo akanakisa 15-inch malaptops akakwana zvakakwana uye akagadzirirwa kune avo vanoda zvishoma zvekuwedzera screen real estate uye kumwe kuwedzera kuita. Iyo Dell XPS 15 9500 ndiyo yedu yepamusoro yekutora zvese uye imwe yeakanakisa Windows Laptop sarudzo dziripo nhasi. Inowanikwa nemaviri 15.6-inch kuratidza sarudzo, inosvika kune gumith Intel Intel i10-9H processor (CPU), 10885GB yeDDR64 RAM, uye NVIDIA… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo Dell XPS 15 ndiyo sarudzo yedu yeakanakisa 15-inch laptop